DHAGEYSO Madaxtooyada Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay dhaqaalo abdan ku bixinayso doorasahda Koonfur Galbeed. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Madaxtooyada Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay dhaqaalo abdan ku bixinayso doorasahda Koonfur Galbeed.
Anwar Mohamed October 29, 2018
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay si toos ah ugu lugyeeladay doorashada la qorshaynayo inay bisha soo socota ee November bartamaheeda ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Xildhibaano ka tirsan labada aqalk ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa eedaymo u jeediyay dowlada dhexe waxayna sheegeen inay dhaqaalaha qaranka ay dowlada dhexe u adeegsanayso taageerada ay siinayso musharaxiin ka mid ah xubnaha xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasoo la aaminsan yahay in madaxtooyadu wadato.
Xilshibaan Cabdalla Xuseen Cali oo ka mid ahaa xubnihii kulanka yeeshay ayaa sheegay in lacagta qaranka lagu bixinayo qaarka mid ah musharaxiinta kuwaasoo diyaarado iyo gaadiid aysan xabadu Karin loogu geeyay magaalada Baydhabo, wuxuuna sidoo kale ku eedeeyay Musuqmaasuq.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq yarrow oo isna ka mid ah xubnaha ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu baalmaray dastuurka dalka Soomaaliya sida uu hadalkiisa u dhigay.
Xildhibaanadaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee xalay kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa dhamaan eedaymo u jeediyay madaxweynaha waxayna sheegen in waxyaabah ay madaxweynaha ku eedeeyeen ay horseedayaan in dib u eegis lagu sameey xilkiisa.
Doorashada madaxweynaha maamulka Koonfurgaleed Soomaaliya ayaa laguw adaa inay dhacdo bartamaha bisha soo socota ee November waxaana jira warar sheegaya in masharaxiinta qaarkood ay dowlada dhexe taageerayso.
← DHAGEYSO Maamulka Jubaland oo ka hadlay amniga magaalada Kismaanyo.